မြန်မာဒုက္ခသည် ပြန်ပို့ရေး အချိန်မတန်သေး | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ပူချူန်းမြို့နေ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ ဖမ်းဆီးခံရ (နောက်ဆက်တွဲ သတင်း)
ငွေကြေးအတွက် ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသော ဒုက္ခသည် →
ဧပြီ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ပြန်ပို့ရမယ့်အချိန် မရောက်သေးဘူးလို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ယူဆထားတဲ့အတွက် ဒီဒုက္ခသည်တွေ ကို အကူအညီပေးရေး ထိုင်းအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိတဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
ဒီဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြန်နိုင်ရေး အခြေအနေ အချိန်အခါ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း သူက ထောက်ပြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားတဲ့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထား ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာချိန်မှာပဲ အခုအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ပို့ရမယ့်အချိန် မတိုင်သေးဘူးလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး အဲရစ် ရွှာ့ဇ် (Eric Schwartz) က ဗွီအိုအေနဲ့ သီးခြား တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်မှာ ပြောသွားတာပါ။
အသံဖိုင် – နားဆင်ရန်
Posted on April 25, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.